'बादललाई निकाल्नुस्' भन्दै प्रचण्ड दिल्ली गएपछि बिग्रिएको रहेछ कुरो - Sutra News
३ आषाढ २०७८
संसदमा प्रचण्डको आक्रोश- गठबन्धनबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व होला भन्ठान्यो तर...
संसदमा प्रचण्डले किन खोजे ओली ?
नेपाल र प्रचण्डबीच बिहानै भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच भयो यस्तो सहमति
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एउटा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले २०७५ साल भदौको २१ देखि २४ सम्म भारतको भ्रमण गरे ।
भ्रमणमा जानुअघि अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'लाई निकालेर अर्को गृहमन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गरे ।
स्रोतको दाबीअनुसार प्रचण्डले ओलीसँग भनेका थिए - 'म दिल्ली जाँदै छु । यहीबेला केही मन्त्री हेरफेर गर्नुस्, त्यसक्रममा बादललाई हटाउनुस । म आएपछि ए म दिल्ली जाँदा केके पो भएछ, मलाई थाहा थिएन भनिदिन्छु ।'
त्यतिबेला प्रचण्डले गृहमन्त्रालयबाट बादललाई हटाएर जनार्दन शर्मालाई राख्न चाहेका थिए । राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिएका ओलीले प्रचण्डको आग्रहलाई 'हुन्छ, म हेरौंला' भनेर टारिदिए । त्यसपछि प्रचण्ड दिल्ली हानिए ।
'केही सहमति नभएको भए पार्टी एक किन हुन्थ्यो र ?' अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रचण्डले भनेका थिए । त्यसपछि द प्रिन्टकी पत्रकारले सोधिन - 'त्यसो भए म भोलिको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दै छु ?'
जवाफमा प्रचण्डले भनेका थिए - 'तपाईंले त्यस्तो सोच्न सक्नुहुन्छ, तर यो कुनै मुद्दा होइन ।'
दिल्लीमा प्रचण्डलाई दिइएको सम्मान र प्रचण्डसँग लिइएको अन्तर्वार्ता देखेपछि बालुवाटारमा बेचैनी छायो । त्यसको केही महिनाअघि मात्र दिल्ली भ्रमण गरेका ओलीलाई लाग्यो - 'दिल्लीले प्रचण्डलाई मलाई भन्दा बढी महत्त्व दियो ।'
प्रचण्ड दिल्लीबाट फर्किसकेपछि ओलीले बादललाई बोलाएर भने - 'प्रचण्डले त तपाईंलाई हटाउन खोज्नुभएको थियो । तपाईंहरूको सम्बन्ध किन बिग्रियो, मैले त उहाँकै सिफारिसमा तपाईंलाई गृहमन्त्री बनाएको थिएँ ।'
'खासै त्यस्तो त केही थिएन, किन मलाई हटाउन खोज्नुभएको रहेछ ? म कुरा गर्छु,' बादलले भने ।
त्यसपछि ओलीले भने - 'अहिलेलाई म केही निर्णय लिन्न । तपाईं यथावत हुनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् ।' यता बादल र उता वामदेव गौतमलाई साथ लिएर सचिवालयमा बहुमत पुर्याउने ओलीको कदम त्यहींबाट शुरू भयो ।
बादलनिकट स्रोत भन्छ - 'बादलले काम गरेका हुन्, तर गृहमन्त्री बन्न नपाएपछि जनार्दन शर्माको समूह बादलमाथि जाइलाग्यो । काम नै नगरेको भन्दै प्रचारमा उत्रियो । त्यतिमात्र होइन, बादलसँग ठेकेदारहरू रिसाए । ठेकेदारका नाइके थिए प्रचण्डका घरबेटी । तिनलाई कारवाही नगर्न प्रचण्डको उर्दी आएको थियो ।'
स्रोतका अनुसार ठेकेदारलाई जसरी पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेर बादलले अड्डी लिएपछि प्रचण्डले 'मैले बनाएको गृहमन्त्री मैसँग ठूलो हुने' भन्दै मुर्मुरिएका थिए र।
प्रकाशित :आषाढ ३, २०७८ बिहिवार - २२:३३:३७
ओलम्पिकमा २ खेलाडी पराजित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको फेसबूक स्ट्याटस- 'गो अन नेपाल'
यी हुन् कोरोनाको खोप कार्डको प्रमाणीकरण गर्ने चार अस्पताल [नामसहित]